Shirka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo maanta lagu wado inuu ka furmo Dhuusamareeb | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Shirka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo maanta lagu wado inuu ka...
Shirka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo maanta lagu wado inuu ka furmo Dhuusamareeb
Waxaa dib u dhac uu ku yimid shirkii loo ballansanaa in magaalada Dhusamareeb ay ku yeeshaan madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada kadib markii halkaas ay wada gaareen madaxdii lagu casuumay shirka.
Shirka oo ay ahayd in uu furmo xalay ayaa dib u dhacay, waxaana sababta lala xiriiriyay sababo farsamo, waxaana la filayaa in shirkan oo ah mid looga tashanayo arrimaha doorashada uu bilawdo gelinka hore ee maanta.
Waxaa horey halkaas gaaray madaxweyneyaasha Maamul Goboleedyada, madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Ra’iisu wasaaraha.
Waxyaabaha la filayay in looga hadlo shirka waxaa kamid ah heshiiskii madaxda ay ku gaartay Muqdisho 17-kii bishii September, xiisadda ka taagan gobolka Gedo iyo arrinta ku saabsan xubanaha guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed.
Previous articleXukun Adag oo lagu riday Alexei Navalny iyo taageerayaashiisa oo banaan baxay (Sawirro)
Next articleDowlada Mareykanka oo Wacad ku martay in ay talaabo ka qaadayso Milatariga afganbiga ku qabsaday dalka Myanmar
Madaxweynaha Afghanistan oo Taalibaan ugu baaqay in dib loo billaabo wadaxaajoodki...
Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa ururka Taalibaan ugu baaqay in dib loo billaabo wadaxaajoodki siyaasadeed oo looga tashanayo mustaqbalka Afghanistaan. Ghani oo ka hadlayey munaasabad...
Safiirka Mareykanka ee QM oo sheegtay in lagaaray xiligii xukuumada...
Mareykanku oo diiday in la baaro dagaalkii Xasuuqii ...
Meydad tiro badan oo laga helay webi mara xadka Tigray iyo...